काठमाडौँ – ‘काठमाडौंको कुनचाहिं सडक जाममुक्त होला ?’ यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहनै पर्दैन । यसको सिधा जवाफ छ– ‘त्यस्तो कुनै सडकै छैन ।’हुन पनि हो ।
काठमाडौंका हरेक साना–ठूला सडकमा दिनको कुनै न कुनै समय जाम हुन्छ नै । ठूला फराकिला भनिएका सडकमा सार्वजनिक बस, माइक्रो, ट्याम्पु र ट्याक्सीले जाम हुन्छ भने साना सडक भने बाटै ढाकिने गरी लाज पचाएरै पार्किङ गरिएका निजी सवारीसाधन वा मोटरसाइकलले गर्दा ।
काठमाडौंको सबैभन्दा धेरै लामो जाममा परिने क्षेत्र भनेको कलंकी आसपास, नारायणगोपाल चोक र कोटेश्वर नै हो । यी क्षेत्रमा जामको मुख्य कारक सार्वजनिक यातायात नै हुन् ।
जाम हुने क्षेत्रको सडकलाई नियाले त्यहाँ केही समानता पाइन्छ । सबैभन्दा पहिला त जाम हुने क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट नै छैनन् । स्वरूप आचार्यद्वारा लिखित यो समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
त्यसपछि अर्को मुख्य समानता भनेको ती चौबाटोहरूको चारैतर्फको चोकमै सार्वजनिक बसका यात्रु चढाउने र ओराल्न बनाइएका बस बिसौनी छन् ।
त्यसमा अविवेकी चालक र अबुझ पैदलयात्रुले उक्त सामान्य जामलाई कठिन बनाइदिन्छन् । त्यसमा सधैं हतारमा हुने नेपाली ‘भ्यालेन्टिना रस्सी’हरूले थप प्रेसर थपिदिन्छन् ।
ट्राफिक प्रहरी, चालक र यात्रुहरू सबैले विवेक नपुर्‍याउने हो भने काठमाडौंका सडक जति नै फराकिला बनाइए पनि जामको समस्या हट्नेवाला छैन ।
सबैको संयुक्त प्रयास भएमा काठमाडौंमा हुने घन्टौं लामो जामको समस्या पूर्ण रूपमा त हट्ला न हट्ला, तर कम भने अवश्य नै हुन्छ ।
प्रकाशित : आइतबार, असार १०, २०७५०८:४२
वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको सुरुवातबाटै छानबिन हुने ! तयार भयो ३८ प्रश्न !
नेकपाका शीर्ष नेताबीचमै कित्ताकाट : बालुवाटारमै झोक्किएर हिडे ४ नेता
२०१८ मा प्रतिमहिना एक हवाई दुर्घटना, ५९ को मृत्यु : किन असुरक्षित नेपाली आकाश ?
बंगलादेशलले यस्तो अवैतनिक पद नदिएपछि छात्रामाथि प्रसाईले गम्भिर आरोप लगाएको खुलासा
बेनेलीको सस्तो मोटरसाइकल नेपाल भित्रियो ! हेर्नुहोस् मूल्यसहित !